Nepali Christian Bible Study Resources - रोमी १:१८
» अध्ययन मालाहरू » रोमीको टिप्पणी » रोमी अध्याय १ » रोमी १:१८
हामी सुसमाचार कसरी प्रचार गरौं?
"परमेश्वरको क्रोध" -- अधिकांश धार्मिक परिवेशहरूमा परमेश्वरको क्रोधको विषयलाई बेवास्ता गरिएको पाइन्छ। परमेश्वरको प्रेमलाई प्रायः उल्लेख गरिए तापनि परमेश्वरको क्रोधको कुरा भने बिरलै गरिन्छ। सुसमाचारलाई प्रस्तुत गर्दा "राम्रो खबर" बताउनु अघि "नराम्रो खबर" बताउनुपर्छ भनी पावल जान्दथे। हामीलाई परमेश्वरको धार्मिकता चाहिएको छ (रोमी १:१७) तर हामीले पाउनु पर्ने त परमेश्वरको क्रोध हो (पद १८)। मुक्ति पाउन तयार हुनु अघि एउटा मान्छेले मुक्तिको निम्ति आफ्नो खाँचो देख्‍नुपर्ने हुन्छ। लुका ५:२७-३२ पढ्नुहोस्। खाँचो नपरेसम्म मान्छे त्यत्तिकै डाक्टरकहाँ जाँदैन। आफूलाई खाँचोमा परेको पापीको रूपमा नदेखेसम्म एउटा मान्छे मुक्तिदाताकहाँ आउँदै आउँदैन।
द्रष्टब्य: पावलले कसरी सुसमाचार प्रस्तुत गरे भन्ने कुरामा राम्ररी ध्यान दिनु महत्त्वपूर्ण छ। उनले अधर्मी तथा भक्तिहीनहरूका विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोध स्वर्गबाट आउँदै गरेको कुराबाट शुरु गर्दछन्! हामीलाई परमेश्वरको सुसमाचारको कति टड्कारो खाँचो परेको छ भन्ने कुरा सबैले बुझून् भनेर पावलले "राम्रो खबर" प्रस्तुत गर्नु अगाडि "नराम्रो खबर" प्रस्तुत गर्दछन्। सुसमाचार प्रस्तुत गर्ने त्यहाँ मूलतः दुइटा तरिका छन्: १) व्यक्तिगत लाभको आधारमा (सुसमाचारले मलाई के कस्तो लाभ हुन्छ? ख्रीष्टियन हुनुमा के कस्ता फाइदाहरू छन्? के सुसमाचारले मलाई सुख मिल्नेछ? सफलता मिल्नेछ? सन्तुष्टि मिल्नेछ? आदि); २) व्यक्तिगत खाँचोको आधारमा (मानिस पवित्र परमेश्वरको क्रोध र दण्डमुनि असहाय र आशारहित अवस्थामा छ, यसकारण उसलाई मुक्तिको खाँचो छ नत्र भने ऊ अनन्त दण्डमा जानेछ)।
सुसमाचार आज प्रायः व्यक्तिगत लाभको आधारमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। त्यसरी सुसमाचार प्रस्तुत गरिएको उदाहरणस्वरूप एउटा पर्चामा लेखिएको कुरालाई हेरौं:
तपाईं एउटा रमाइलो, स्वतन्त्र र भरिपूर्ण खाले जीवन जिउन चाहनुहुन्छ, होइन र? ठीक छ! म तपाईंजस्तै व्यक्तिसँग कुरा गर्न चाहिरहेको छु। मेरो पनि तपाईंको जस्तै चाहना छ। तपाईं भन्नुहोला, "अरे, मेरो जस्तै चाहना तपाईंलाई पनि? तपाईं त ख्रीष्टियन भन्ठान्या!" हो, म ख्रीष्टियन हुँ। तर मान्छेमा हुने आधारभूत इच्छाहरू मसँग पनि छन् -- सन्तुष्टि, सुख, स्वतन्त्रता आदि इत्यादि। अनि यी सबै कुराहरू मैले मेरो सबैभन्दा प्रिय मित्र येशू ख्रीष्टमा प्राप्‍त गरें। मेरो अनुभवमा ख्रीष्टियन हुनु वर्तमानकै लागि लाभदायक कुरा हो। स्वर्ग र नरक छँदै छैनन् भने पनि (हुन त ती दुवै छन्), म त ख्रीष्टियन नै बन्नेथिएँ। किन? किनकि मलाई थाह छ ख्रीष्टियन जीवन सबैभन्दा उत्तम जीवन हो। यो जीवन मात्र जिउन लायक जीवन हो।
अब यी कुराहरू साँचो हुन् भनेर हामीले स्वीकार त गर्नुपर्छ। सन्तुष्टि, सुख, स्वतन्त्रता तथा अन्य थुप्रै हितकर कुराहरू सबै ख्रीष्ट येशूमै पाइन्छन् र निश्चय पनि ख्रीष्टियन जीवन मात्रै जिउन लायक जीवन हो। तर के हामीले सुसमाचारलाई यो आधारमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हो त? के पावलको तरिका यही थियो? मुक्ति नपाएका धेरै-धेरै मानिसहरू आफूहरू ज्यादै सुखी छौं भन्ने ठान्दछन्। उनीहरू जीवनसित तुलनात्मक हिसाबमा सन्तुष्ट नै हुन्छन्, उनीहरूका काम-कुरा राम्रै चलिरहेका हुन्छन् र आफूले गरिरहेको काम-कुरामा उनीहरू खुशी नै हुन्छन्। आफ्नो जीवन शैलीसित उनीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् र उनीहरूलाई ख्रीष्टियन बन्न विवश पार्ने त्यस्तो कुनै कुरा उनीहरू देख्दैनन्। "तिमीलाई यसैमा खुशी लाग्छ भने ख्रीष्टियन हुनु तिम्रो लागि राम्रै कुरा हो", उनीहरू भन्छन्, "तर मलाई ठीकै छ र म जसरी जिइरहेको छु त्यसमा म खुशी नै छु।" उनीहरूले ख्रीष्टको निम्ति आफ्नो खाँचोलाई देख्‍न सकिरहेका छैनन्।
« रोमी १:१४-१७
रोमी १:१८-२३ »